रेखाको लागि परिक्षा बन्दै मालिका ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodरेखाको लागि परिक्षा बन्दै मालिका ?
अभिनेत्री रेखा थापाले निर्माण र निर्देशन गरेको अनी खेलेको पनि फिल्म मालिका अब अर्को शुक्रबारदेखि रिलिज हुँदैछ । यो सिनेमामा रेखाले महिला सशक्तिकरणको कुरा उठान गरेकी छिन् ।
जाजरकोटकी स्थानिय किशोरी कमलालाई उनले सिनेमाको हिरोइन बनाएकी छिन् । यसैले पनि रेखा यसपटक बक्स अफिसमा धमाल मच्चाउने धुनमा छिन् ।
महिला बन्नु अघि मानिस बन्नुपर्छ भनेर यो सिनेमाले सन्देश दिन खोजेको छ । बक्स अफिसमा रेखाका लगातार ३ वटा सिनेमा असफल छन् । पलाँस, डायरी र रुद्रप्रिया असफल भएका कारणले पनि रेखा थापाका लागि मालिकाको बक्स अफिस महत्वपूर्ण छ । सिंगल हलमा रानी मानिएकी रेखा अहिले कमजोर बन्दै जाँदा आफै निर्देशनमा पनि उत्रिएकी छिन् ।
रेखा थापाको यो प्रयास सफल भएको खण्डमा उनी फेरि बक्स अफिसमा उदाउनेछिन् । मालिका रेखाका लागि एउटा परिक्षा नै हो ।
nepali nepali movie